थोकमा टेस्टोस्टेरोन एनाथेट पाउडर किन्नुहोस् | AASraw
/ब्लग/टेस्टोस्टेरोन Enanthate/थोकमा टेस्टोस्टेरोन एनाथेट पाउडर किन्नुहोस्
प्रकाशित 01 / 27 / 2018 by 阿斯劳 मा लेखियो टेस्टोस्टेरोन Enanthate.
टेस्टोस्टेरोन ईन्न्थेट भनेको के हो?
टेस्टोस्टेरोन Enanthate निम्न टेस्टोस्टेरोन को उपचार को लागि सबै भन्दा सामान्य प्रयोग टेस्टोस्टेरोन मध्ये एक हो। यो प्रदर्शन परिमार्जन सर्कलहरूमा पनि धेरै लोकप्रिय छ। यो बजारमा सबैभन्दा किफायती एनाबिक स्टेरियोड्समध्ये एक हो, यो अत्यधिक बहुमुखी, सबैभन्दा वयस्क पुरुषले राम्रोसँग सहन सक्छ र यसको आपूर्ति छतमा छ।
टेस्टोस्टेरोन एनाथेट एक एनाबोलिक स्टेरॉयड हो जुन सबै स्तरको प्रयोगको लागि एकदम सही छ। यो पहिलो पल्ट स्टेरॉयड प्रयोगकर्ताको लागि उत्तम एनाबिल स्टेरॉइड हो र काठको धेरै समयको व्यक्तिसँग समान रूपमा प्रभावकारी हुनेछ। यसले सम्भावित साइड इफेक्टहरू साथ लिनेछ तर हामी पनि फेला परेका थियौं कि उनि नियन्त्रण गर्न सजिलो छ। यदि यो आश्चर्यजनक छ भने यो साँच्चै हुनु हुँदैन। सबै पछि, यद्यपि सिंथेटिक यो केवल टेस्टोस्टेरोन हो, मानव शरीर मात्र राम्रो छैन-आदी हो, तर यो हाम्रो स्वास्थ्य र भलाइको लागि आवश्यक छ।
के हो टेस्टोस्टेरोन एनाथेट पाउडर?
नाम: टेस्टोस्टेरोन ईन्न्थेट
आणविक फार्मूला: C21H28O3
आणविक वजन: .400.59००..XNUMX।
मेल्ट पोइन्ट: -34 39--XNUMX ℃
भण्डारण अस्थायी: २-2 ℃
टेस्टोस्टेरोन एनाथेट साइकल र प्रयोग
टेस्टोस्टेरोन एनाथेट चक्र सामान्यतया कि बल्क या मास प्रकृति को प्राप्त गर्दै छन्, यद्यपि यो एक धेरै विशिष्ट तरिका मा पनि कटौती या मोटापे को चक्र मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सामूहिक लाभ उठाउनका लागि, टेस्टोस्टेरेरोन एनाथेट सामान्यतया उच्च खुराक (सामान्यतया न्यूनतम रूपमा प्रति सप्ताह 500mg) मा कार्यरत छ, र किनकि यो एन्कोलिक स्टेरॉइडसँग लामो एस्टरको साथमा छ, यसको वरिपर लामो लामो आधा जीवन प्रदर्शन हुनेछ।7- 10 दिन, र त्यसैले टेस्टोस्टेरोन एन्थेट चक्र सामान्यतया 10-12 को हप्ताको लागि दौडाइन्छ हप्ता वा लामो।
दुवै ठुलो र कटौती चक्रहरूमा, टेस्टोस्टेरोन एन्यान्टनेट सामान्यतया प्रकृतिको अन्य यौगिकहरूसँग स्टक गरिएको छ जसले प्रयोगकर्ताको अन्तिम लक्ष्य (बल्क, जन प्राप्त गर्ने, वा चिसो हानि) को सुविधा दिन्छ। उदाहरणका लागि, बल्कको उद्देश्यको लागि टेस्टोस्टेरोन एन्यान्टिएट चक्र सामान्यतया डेक्टा-डराबोलिन (न्यान्ड्रोलोन डेनानोनेट) र / वा डियनबोल (Methandrostenolone) को प्रयोग गर्दछ, जहाँ डियनबोल सामान्यतया पहिलो6हप्ताको लागि किक-सुरुवात कम्पासको रूपमा चलाइएको छ।
घटनामा टेस्टोस्टेरोन एन्यान्टिएट चक्र कटाई वा मोटो हानि चक्र हुन्, टेस्टोस्टेरोन एन्यान्टिएट सामान्यतया प्रति 100mg को एक धेरै कम टीटीटी (टेस्टोस्टेरोन प्रतिस्थापन थेरेपी) खुल्ला हुन्छ जबकि अन्य यौगिकहरू अझ बढी फलफूल र काटा हानिको लागि उपयुक्त हुन्छन्। । यस खुराक मा टेस्टोस्टेरोन एनाथेट को उपयोग केवल लाभ र प्रदर्शन को बढावाहरु लाई जोडने को वाहेक सामान्य शारीरिक कार्य को बनाए राखन को लागि मात्र हो।
को खुराक कच्चा टेस्टोस्टेरोन एनाथेट पाउडर:
निम्न टेस्टोस्टेरोनको उपचार गर्न, मानक टेस्टोस्टेरोन एन्यान्टेट डिक्सहरू 100-200mg मा प्रत्येक 7-10 दिन दायरामा सबै भन्दा कम हुन्छ। तथापि, केहि चिकित्सकहरूले कुल डाइजअप विभाजन गर्नेछन् र यसलाई प्रत्येक पाँच दिन व्यवस्थापन गर्नेछ। अमेरिकामा कम सामान्य केही चिकित्सकहरूले 200-400mg को हरेक 2-3 हप्ताको र दुई पटक प्रत्येक4हप्तामा खुट्टाको वर्णन गर्दछन्। यो धेरै अपर्याप्त छ तर कुनै अभ्यास केही पछ्याउँछ। उपचारको कुल अवधि अनिश्चित हुनेछ। अधिकांश मान्छे जो निम्न टेस्टोस्टेरोन उपचारको आवश्यकता पर्दछ यो जीवनको लागि आवश्यक हुनेछ। यो कष्टप्रद लाग्न सक्छ तर आफैलाई एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुहोस्; के तपाई त कम टेस्टोस्टेरोनबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ वा यसको उपचार गर्नुहुन्छ?
प्रदर्शन परिमार्जन सेटिङमा, सामान्य टेस्टोस्टेरोन एन्यान्टेट डेजहरू 200-500mg प्रति हप्ताको दायरामा खस्नेछन्। 200-250mg प्रति हप्ता धेरै सामान्य छ भने हार्मोन केवल अन्य एनाबिक स्टेरियोड्स प्रयोगको कारण प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन दमनको सामना गर्न प्रयोग गरिन्छ। साँचो एनाबोलिक प्रभावको लागि, प्रायः पुरुषहरूले प्रति सप्ताह 400-500mG खोज्न अत्यधिक प्रभावकारी र नियन्त्रण गर्न धेरै सजिलो हुनेछ। यस्तो खुराक सामान्यतया कुल साप्ताहिक डाइजिंगको लागि दुई हप्ता दुई बराबर खुट्टामा विभाजित गरिनेछ। खुट्टाहरू 500mg प्रति हप्ता भन्दा माथि जान सक्छ; तथापि, धेरै पुरुषहरूले 500mg दायरालाई सबैलाई चाहिने आवश्यकता पाउनेछन्। यदि अधिक वांछित छ भने, धेरै पुरुषहरू भेट्टाउँछन् 600-1,000mg प्रति हप्ता सहन सक्छ र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर खुट्टाहरू 1,000mg दृष्टिकोणको दृष्टिकोणले प्रतिकूल प्रभावहरूको सम्भावना बढ्न सक्छ। मानिसलाई सहन र नियन्त्रण गर्न सक्ने कति टेस्टोस्टेरोनले एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई अर्को भिन्न हुनेछ। तथापि, अधिकांश पुरुषहरूले 1,000mg प्रति हप्ता माथि सबै खुट्टाहरू फेला पार्नेछन् तर सबै स्तरमा ग्यारेन्टी साइड इफेक्टहरू।
तपाईंको प्रयोगको बावजूद, टेस्टोस्टेरोन एन्यान्टिएट सबै एनाबोलिक स्टेरियोड्ससँग राम्रोसँग ढोका। तथापि, कुनै अन्य टेस्टोस्टेरोनसँग स्टक गर्न कुनै कारण छैन। यो धेरै मामलाहरुमा बेपरहित हुनेछ। साधारणतया अन्य स्टेरियोड्सहरू छनौट गर्नुहोस् जुन प्रयोगको इच्छित प्रयत्नलाई सबैभन्दा कुशलतापूर्वक पूरा गर्दछ।
टेस्टोस्टेरोन Enanthate समीक्षाहरू:
टेस्टोस्टेरोन एनाथेट एक धेरै सरल एनाबिक स्टेरॉयड हो, तर यो पनि सबै समयको सबैभन्दा ठूलो anabolic स्टेरॉयड मध्ये एक हो। यो अत्यन्त शक्तिशाली छ र अधिकांश वयस्क पुरुषहरू बीचको धेरै उच्च सहनशीलता लिन्छ। चिकित्सक एजेन्सीको रूपमा, टेस्टोस्टेरोन एनाथेटको प्रयोगले तपाईंको जीवनलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छ। यो एक मध्य उमेरको व्यक्तिको लागि सम्भव भन्दा बढी छ जस्तो लाग्छ कि उसले आफ्ना बिसोहरूसँग फेरि छ। न केवल उनको ईश्वर र जोसिलो जीवन फर्कने को लागी, उनी सबै भन्दा स्वस्थ हुनेछन्।
प्रदर्शन क्षमतामा, धेरैले उनीहरूको टेस्टोस्टेरोन एनाथेटसँग अन्य एनाबिक स्टेरियोड्स स्ट्याक गर्न सक्नेछन् यो एक्लै प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो आधार आधारभूत एनालिलिक स्टेरॉइड हो जसले शारीरिक रूपमा नैतिक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छ। यो साँचो र उल्लेखनीय रूपान्तरण प्राप्त गर्न सुपरफेरियोलोजिकल खुराक लिनेछ, कृतज्ञ प्रभावहरूको लागि थोरहोल्ड धेरै उच्च छ। समान रूपमा महत्वपूर्ण, जबकि यस स्टेरॉयड को धेरै प्रभावकारी प्रभावकारी रूपमा सस्ती भन्दा अधिक छ यो भन्दा पहिले नै यो अपील र अधिक अपील दे। तपाईंको अनुभवको स्तरको बावजूद तपाईं टेस्टोस्टेरेरोन एन्यान्टेटको साथ गलत गर्न सक्नुहुन्न।
कहाँतिर टेस्टोस्टेरोन एनाथेट पाउडर अनलाइन खरीद गर्नुहोस्?
तपाईं धेरै Trenbolone Acetate पाउडर स्रोत अनलाइन पाउन सक्नुहुन्छ, तर यो वास्तविक टिन्डलोनोन एसीटेट पाउडर अनलाइन गर्न गाह्रो छ। त्यहाँ थुप्रै स्रोतहरू बजारमा नक्कली उत्पादनहरू बिक्री गर्छन्। त्यसोभए जब तपाइँ ट्रेनबोलोन एसिटेट पाउडर अनलाईन किन्नुहुन्छ, तपाईलाई एक छनौट गर्न आवश्यक छ वास्तविक स्रोत.
फाइदाहरू टेस्टोस्टेरोन एनाथेट पाउडर खरिद गर्नुहोस् AASraw बाट:
1। कम फैक्टरी मूल्यको साथ उत्तम स्टेरियोड्स कच्चा
हामी सबै पाउडरहरूको उच्चतम शुद्धताको ग्यारेन्टी गर्दछौं> 98%%, र किनभने हामी निर्माता विक्रेता होइनौं, यहाँ सबै सामानहरू सिधा न्यून मूल्यको साथ बेचिन्छन्।
2। स्टेरॉइड कच्चे माल को फास्ट र सुरक्षित डिलीवरी
1) पार्सलले 24 घण्टा भित्र भुक्तानी पछि पठाउन सकिन्छ, त्यसपछि ट्र्याकिङ नम्बर प्रदान गर्नुहोस्।
2) सबै स्टेरॉयड कच्चे माल को सुरक्षित र विवेकपूर्ण शिपमेंट रिच अनुभवी शिपिंग गारंटी। तपाईंको व्यक्तिगत ठेगाना अनुसार विभिन्न यातायात विधिहरू, र उत्तम एक छनौट गर्नुहोस्।
3) सुरक्षित वितरणको उच्च सफलता दर 95% माथि छ।
4) स्टेरियोड्स पाउडर को लागि डेलिभरी टाइम: यूएसए सम्म 3-5 कार्य दिन, र ईयू देशहरुमा 4-6 कार्य दिवसहरु।
3। हामीसँग संसारभर ग्राहकहरू छन्
1) व्यवसायिक सेवा र धनी अनुभवले ग्राहकहरूलाई सजिलै संग महसुस गर्छ, सबै प्रकारको स्टेरॉइड सामग्रीको पर्याप्त स्टक र छिटो वितरणलाई उनीहरूको इच्छा पूरा गर्दछ।
२) प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रियाको सराहना हुनेछ, तपाईंको सुझावहरूले हामीलाई हाम्रो सेवा सुधार गर्नका लागि गिल्ड गर्नेछन्, र सबै ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न यो हाम्रो उत्तरदायित्व हो।
)) AASraw स्टेरोइड कच्चा मालको एक भरपर्दो आपूर्तिकर्ता हो उत्तम गुणस्तरको सामानहरु संग, सुरक्षित र छिटो शिपिंग राम्रो सेवा संग।
टैग: टेस्टोस्टेरोन एनाथेट पाउडर
देखि टेस्टोस्टेरोन propionate पाउडर को परिभाषा गाइड	Methenolone Enanthate पाउडर किन्नुहोस्: यो तपाईलाई थाहा गर्नु अघि खरीद नगर्नुहोस् !!!